Apple iOS 11 Beta Version6မှာ ဘာလို့ Apple Maps Icon ကိုပြောင်းလဲခဲ့သလဲ?
17 Aug 2017 . 10:55 AM
Apple ကနေ တနေ့က အသစ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ iOS 11 Beta Version6မှာ iOS ရဲ့ အဓီက Application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Apple Maps ရဲ့ Icon Design ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်ကျော်ထဲက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Apple iOS7နဲ့ အတူအခုအချိန်အထိရှိနေခဲ့တဲ့ Icon Design ကို အသစ်ပြောင်းလဲရတာဟာ Apple မှာ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုရှီနေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအကြောင်းအရင်းကတော့ ယခင် Apple Map Application ရဲ့ Icon မှာ ပြသနေတဲ့ မြေပုံဟာ ယခင် Apple ကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ရဲ့ နေရာကို ပြသထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်မှာ Apple ကုမ္ပဏီဟာ California, Cupertino မှာ Apple Park လို့ခေါ်တဲ့ အာကာသယာဉ်ပုံစံ ရုံးချူပ်အသစ်ကို ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အတွက် သူရဲ့ Maps Application ရဲ့ Icon ပုံမှာပါဝင်တဲ့မြေပုံကိုပါ ယခုအသစ်ပြောင်းရွေ့ထားတဲ့ Apple Park Campus နေရာကိုပြောင်းလဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Apple ဟာ iOS 11 Beta Version6မှာ Apple Maps Application ကိုပဲ Icon Design ပြောင်းလဲခဲ့တာမဟုတ်ပဲ App Store Icon ကိုလည်း ပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခင်ထဲကရှိနေခဲ့တဲ့ အလျားလိုက်မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုမှာ ခဲတံ နဲ့ စုတ်တံကို တြိဂံပုံစံထားထားတာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲ မျဉ်းကြောင်း ၃ ကြောင်းက ကြိဂံ ပုံစံ တစ်ခုအပေါ်တစ်ခုက ထပ်ထားတာမျိုးနဲ့ ပိုပြီးတူညီနေပါတယ်။
ယခင်ကလည်း iOS 11 Beta Version4မှာတုန်းကလည်း Safari Browser ရဲ့ Icon က သံလိုက်အိမ်မြှောင်ရဲ့ မြှားကို ညာဘက်သို့ တစ်စိပ်ထပ်ရွေ့ခဲ့ပြီး မသိမသာပြောင်းလဲခဲ့ပါသေးတယ်။
iOS 11 ဟာ လက်ရှိ iOS 10 ထက် ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ Features တွေပါဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့အပြင် လက်ရှိ Beta Version တွေမှာလည်း ပြောင်းလဲမှုတွေအများအပြားပြုလုပ်နေတဲ့အတွက် တကယ် Stable Update ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ အခုလက်ရှိ iOS 10 ကနေဆိုရင် တော်တော်လေးကို သုံးရတာကအစ ပြောင်းလဲသွားလောက်မှာပါ။
Apple ကနေ တနကေ့ အသဈထုတျပေးလိုကျတဲ့ iOS 11 Beta Version6မှာ iOS ရဲ့ အဓီက Application တဈခုဖွဈတဲ့ Apple Maps ရဲ့ Icon Design ကိုပွောငျးလဲခဲ့ပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ လေးနှဈကြျောထဲက ထှကျရှိခဲ့တဲ့ Apple iOS7နဲ့ အတူအခုအခြိနျအထိရှိနခေဲ့တဲ့ Icon Design ကို အသဈပွောငျးလဲရတာဟာ Apple မှာ အကွောငျးအရငျးတဈခုရှီနတောကွောငျ့ပဲဖွဈပါတယျ။
အဆိုပါအကွောငျးအရငျးကတော့ ယခငျ Apple Map Application ရဲ့ Icon မှာ ပွသနတေဲ့ မွပေုံဟာ ယခငျ Apple ကုမ်ပဏီရုံးခြုပျရဲ့ နရောကို ပွသထားခွငျးဖွဈပွီး ယခုအခြိနျမှာ Apple ကုမ်ပဏီဟာ California, Cupertino မှာ Apple Park လို့ချေါတဲ့ အာကာသယာဉျပုံစံ ရုံးခြူပျအသဈကို ပွောငျးလဲဖှငျ့လှဈထားတဲ့အတှကျ သူရဲ့ Maps Application ရဲ့ Icon ပုံမှာပါဝငျတဲ့မွပေုံကိုပါ ယခုအသဈပွောငျးရှထေ့ားတဲ့ Apple Park Campus နရောကိုပွောငျးလဲခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
Apple ဟာ iOS 11 Beta Version6မှာ Apple Maps Application ကိုပဲ Icon Design ပွောငျးလဲခဲ့တာမဟုတျပဲ App Store Icon ကိုလညျး ပွောငျးလဲခဲ့တာဖွဈပွီး ယခငျထဲကရှိနခေဲ့တဲ့ အလြားလိုကျမဉျြးကွောငျးတဈခုမှာ ခဲတံ နဲ့ စုတျတံကို တွိဂံပုံစံထားထားတာမြိုးမဟုတျတော့ပဲ မဉျြးကွောငျး ၃ ကွောငျးက ကွိဂံ ပုံစံ တဈခုအပျေါတဈခုက ထပျထားတာမြိုးနဲ့ ပိုပွီးတူညီနပေါတယျ။
ယခငျကလညျး iOS 11 Beta Version4မှာတုနျးကလညျး Safari Browser ရဲ့ Icon က သံလိုကျအိမျမွှောငျရဲ့ မွှားကို ညာဘကျသို့ တဈစိပျထပျရှခေဲ့ပွီး မသိမသာပွောငျးလဲခဲ့ပါသေးတယျ။
iOS 11 ဟာ လကျရှိ iOS 10 ထကျ ပိုပွီးကောငျးမှနျတဲ့ Features တှပေါဝငျလာမှာဖွဈတဲ့အပွငျ လကျရှိ Beta Version တှမှောလညျး ပွောငျးလဲမှုတှအေမြားအပွားပွုလုပျနတေဲ့အတှကျ တကယျ Stable Update ထှကျလာပွီဆိုရငျတော့ အခုလကျရှိ iOS 10 ကနဆေိုရငျ တျောတျောလေးကို သုံးရတာကအစ ပွောငျးလဲသှားလောကျမှာပါ။